Moments leh saaxiibo 22
Qofku miyuu jiri karaa gudaha jidhkiisa oo wuxuu arkayaa shaqooyinka hay'adaha kala duwan, hadday sidaas tahay sidan ayaa loo sameyn karaa?
Mid ka mid ah jirka ayaa laga eegi karaa oo arki karaa xubnaha jirka ee kala duwan. Tan waxaa lagu sameeyaa kulliyadda aragtida, laakiin maaha aragtida taas oo ku kooban waxyaabaha jidhka. Indhuhu waxay u tababaran yihiin inay arkaan waxyaalaha jidhka. Indhaha kama diiwaangelin doonaan gariirka ka hooseeya ama ka sareeya octave-ka jirka, sidaa darteed maskaxdu uma tarjumi karto si caqli ah waxa aanu isha u gudbin karin. Waxaa jira gariir ka hooseeya octave jirka, iyo sidoo kale kuwo kale oo ka sarreeya. Si loo duubo gariirkaas indhaha waa in la tabobaraa. Waa suurta gal in la tababaro indhaha si ay u duubto walxaha aan lagaran karin aragga caadiga ah Laakiin hab ka duwan ayaa loo baahan yahay si qofku u arko xubin sida shay jidhkiisa gudihiisa ku jira. Kuliyada gudaha halkii ay ka ahaan lahayd aragtida kore waa in la horumariyo. Midka aan hibo aqoon u leh kuliyadan oo kale waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo iyada oo la horumarinayo kuliyada isku-xidhka, taas oo ah geedi socod maskaxeed. Iyada oo la raacayo is-dhexgalka ayaa sidoo kale lagu horumarin lahaa awoodda falanqaynta. Tababarkan ayaa maskaxdu kaga duwan tahay xubnaheeda ay tixgalisay. Xilli dambe, maskaxdu waxay awood u yeelan doontaa inay meeleeyaan unug maskax ahaan iyo, iyadoo dhexda ka fekereysa waxa ku saabsan, dareemayso inuu garaacayo. Ku darista dareenka dareenka maskaxda wuxuu awood u siinayaa maskaxda inay si aad ah u aragto si fiican isla markaana ay u horumariso aragtida maskaxda ee ku saabsan xubnaha. Marka hore xubinta lama arkin, sidoo kale waa waxyaabaha jirka, laakiin waa feker maskaxeed. Goor dambe, si kastaba ha noqotee, xubnaha waxaa loo arki karaa sidii si muuqata oo muuqata wax shay ahaaneed. Iftiinka lagu arko ma aha iftiinka jirka ee waa gariir, laakiin waa iftiin ay diyaarsato maskaxda lafteeda oo lagu tuuro xubnaha baaritaanka. In kasta oo xubnaha la arko oo shaqadiisa ay fahamsan tahay maanka, tani maahan muuqaal jireed. Aragga gudaha dhexdiisa waxaa lagu arkaa mid aad u cad oo loo fahmay si ka badan waxyaabaha aaladaha jirka ay yihiin.
Waxaa jira qaab kale oo lagu arko xubnaha jirka ee jirka, taas oo aan ahayn, si kastaba ha noqotee, waxay ku timid koorso ah tababarka maskaxda. Tani macnaheedu waa habka loo maro horumarka maskaxda. Waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo beddelo xaaladdiisa miyir-qabka jirkiisa loona beddelo jirkiisa dhimirka. Markii tan la sameeyo, aragtida astral ama clairvoyant waxay noqotaa mid shaqeynaya, marka xaaladdan la joogo, jirka astral wuxuu badanaa ka tagayaa jirka si kumeel gaar ah ama wuxuu si furan ugu xiran yahay. Xaaladdaas oogada jirka ayaa lagu arkaa dhiggeeda astral ee jirka astral-ka iyadoo mid muraayad eegaya muraayad uusan wajigiisa arkin laakiin ka tarjumeysa ama wajigiisa wajigiisa. Tani waa in loo qaataa si tusaale ahaan loo muujiyo, sababta oo ah jirka qofka astral waa naqshadeeye jirka jirkiisa, xubin walboo jirka kamid ahna waxay leedahay moodeel u gaar ah oo kuxiran qeybta astral. Dhaqdhaqaaq kasta oo jirka jireed waa ficil ama ficil ama muujinta muuqaalka jirka ee astral jirka; Xaaladda jidhka jidhku si dhab ah ayey ugu muujisan tahay jirka astral. Sidaa darteed, qofku wuxuu ku arki karaa xaalad si gaar ah loo arki karo jirkiisa astral, sida muuqaalka jir ahaaneed wuxuu arki karaa jirkiisa jir ahaana xaaladaas wuxuu arki karaa dhamaan qeybaha gudaha iyo jirkiisa la'aantiis, maxaa yeelay kuliyada astral ama run aragtida loo yaqaan 'clairvoyant aragtida kuma koobna' waxyaabaha ka baxsan sida jir ahaaneed.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo kobciyo kulliyadaha clairvoyant, laakiin mid ayaa lagula taliyaa akhristayaasha
Qaaciddani waa in maskaxda marka hore la horumariyo. Ka dib maskaxdu markay weynaato, kulliyadda kulku waxay doonaysaa, haddii la doonayo, inay u hesho dabiici ahaan sida ubaxa geed guga. Haddii ubaxyada lagu qasbo ka hor xilligooda habboon, dhaxan ayaa dileysa, miro dhalna ma laha, marar badanna geedka laftiisu wuu dhintaa. Aaladda loo yaqaan 'clairvoyant' ama awoodaha kale ee maskaxdu waa la heli karaa ka hor inta maskaxdu aysan gaarin qaangaarka oo ay tahay sayidka, laakiin waxay u yeelan doonaan sida ugu yar sida dareenka qofka doqonka ah. Kala badh clairvoyant ah ma garanayo sida loogu isticmaalo iyaga si xikmad leh, waxaana laga yaabaa inay yihiin habka keenaya jahwareerka maskaxda.
Mid ka mid ah qaabab badan oo loogu talagalay horumarka maskaxda waa in qofku qabto shaqadiisa si xushmad iyo xasilooni la’aan ah. Tani waa bilow wax walbana waa la sameyn karaa marka hore. Waxaa la heli doonaa haddii la isku dayo, in dariiqa waajibka ahi uu yahay wadada aqoonta. Marka qofku waajibkiisa guto wuxuu helayaa aqoon, waana laga xorayn doonaa baahiyaha waajibaadkaas. Waajibaad kastaa waxay u horseedaa waajibaad sare dhammaan waajibaadka sifiicanna ku dhamaaday aqoonta.